Eminye yemisebenzi yaseNingizimu Afrika ye-Phone Call to the World obekukhangiswa ngayo kwi-COP26.Click here for English version
Uphiko lwe-Centre for Communication, Media and Society (i-CCMS) eSikoleni se-Applied Human Sciences luhlanganyele ne-Art: A Resource for Reconciliation Over the World South Africa (i-ARROWSA) ukwenza umbukiso e-Glasgow obuyingxenye yengqungquthela ebidingida ngezemvelo nokuguquguquka kwesimo sezulu, i-United Nations Climate Change Conference (i-COP26).
I-CCMS ne-ARROWSA bayingxenye yenhlangano yasemhlabeni esebenzisa ubuciko ukubhunga ngezemvelo, i-Phone Call to the World eholwa yi-Scottish Youth Theatre yase ixhaswa ngumkhandlu wamaNgisi i-British Council. Loluhlelo ludingida ngezinkinga zokuguquguquka kwesimo sezulu nezemvelo ngokusebenzisa ubuciko, isayensi nobuchwepheshe besimanjemanje.
Amaqoqo amathathu entsha aqhamuka emazwenikazi amathathu abhunga ngokuguquguquka kwesimo sezulu nanomthelela wakho ezindaweni zabantu, ahlanganyele ukubheka le nselelo yomhlaba ndawonye. Besebenzisa uhlelo oluthi Phone Call to the World, lentsha eqhamuka e-Scotland, eNingizimu Afrika, e-Palestine, eNgilandi nase-India isebenzisa ubuchwepheshe ukuhlanganisa umsebenzi ofundisayo, obuzayo, ohlolisisayo nowenza ukuthi bonke abasuke beyibukele abasukume babhukule ukwenza umehluko ngodaba lokuguquguquka kwesimo sezulu.
Ngesikhathi kune-COP26, i-Phone Call to the World yayinombukiso owawuhlanganisa umsebenzi wabo bonke ababambisene nayo kanjalo nentsha eyingxenye yayo. Lombukiso wawuxoxa indaba yemiphakathi ehlukene ukuveza indlela yonke inhlangano eyingxenye yayo ebuka ngayo izinto. Umsebenzi wawuhlanganise okuxoxwayo nokubukwayo kukhombisa indlela intsha ephila ngayo futhi ugcizelela ukuthi bafuna ukubona ubulungiswa ngodaba lokuguquguquka komhlaba manje. Umbukiso uyindawo etshengisa ukuthi ingozi enkulu emhlabeni ikuphi nokuthi yini engenziwa ukushintsha lokho ezindaweni abantu abahlala kuzona.
Umfundisi wase-CCMS nongusihlalo we-ARROWSA, uDkt Mary Lange nguyena obengamele uhlelo lwaseNingizimu Afrika obelubandakanya i-ARROWSA Bechet, i-Sydenham eThekwini, nentsha yase-South Roots International eqhamuka e-Pelican Park nase-Cape Flats.
UMnu Bheki Dlamini ongumgqungquzeli we-ARROWSA Bechet uthe: ‘Kube yithuba elihle kithi ukuthi sibhekane nento esiyaziyo kodwa esingakaze sizinike ithuba lokufunda ngayo. Leli bekuyithuba lokuthi sizicije ngalezi zinto ukuze cishe sithole izisombululo zokulungisa inkinga yokuguquguquka kwesimo sezulu nokuyinto ecace bha uma ubuka eThekwini. Kube mnandi kakhulu ukuletha ubuciko kulolu daba nokwenze kwaba mnandi kwababekhona kodwa bebe befunda.’
UNksz Mahri Reilly we-Scottish Youth Theatre uthe: ‘Ukuvumelana ngemizamo nezimiso zabantu abayingxenye ye-Phone Call to the World yiwona mdlandla oqhube lomsebenzi.
Umsebenzi wabalingani bethu baseNingizimu Afrika, i-ARROWSA ne-South Roots International ukhombisa okungenzeka uma intsha inikwa amandla okuthatha izinyathelo yenze umehluko emiphakathini yayo. Siyaziqhenya ngokuthi sitshengise izivakashi zethu umsebenzi wazo e-Glasgow ngesikhathi kune-COP26.’
NgoMfumfu walonyaka, intsha ye-ARROWSA Bechet iholwa ngomdidiyeli wezikole ngaphansi kwe-ARROWSA - uDlamini - yemukele intsha yaseSouth Roots International nababeyingxenye ye-Local History Museum, i-Abasha Bash, isonto lonke esikoleni i-Bechet, lapho bekudingidwa khona ngokuguquguquka kwesimo sezulu. Izinhlelo zalelo sonto zazibandakanya ukuxoxa nabasebenza eziqiwini nongoti wezinyoka, uMnu Nick Evans osebenza e-Palmiet Nature Reserve e-Westville.
Baxoxa ngolwazi lwendabuko kanjalo nobuchwepheshe obungayicekeli phansi imvelo. Okunye ngalelosonto kwakuwumculo, umdanso, izinkondlo, amavidiyo nezithangami zolwazi ezifundisa ngokulingisa nokwaphela ngombukiso omuhle owenzelwa abasesikoleni i-Bechet.
UNksz Tamia George, ongomunye wababamba iqhaza kwi-ARROWSA Bechet, uthe: ‘Kwakumnandi kakhulu ukuhlangana nabase-South Roots International, sahlanganisa umsebenzi wePhone Call to the World. Besimatasa sihlanganisa umsebenzi kodwa futhi besifunda okuningi. Kusivule amehlo kanti siyi-ARROWSA siyabonga ngethuba lokufunda nokukhula, hhayi siyisikole kuphela kodwa njengomphakathi ukuze senze umhlaba wethu indawo engcono.’
Omunye obeyingxenye ye-ARROWSA Bechet, uNksz Mary Tshiteya uthe: ‘Ukuba yingxenye ye-COP26 yinto emnandi kakhulu, hhayi nje kithina njenge-ARROWSA kodwa nakimina uqobo. Sengifunde okuningi ezinhlelweni ezinhlobonhlobo. Kuze kube yimanje besingakayisukumeli kahle-hle lenkinga yokuguquguquka kwesimo sezulu ngakho ukufunda ngezindlela ezihlukene ngezinto esingazenza thina uqobo ukunciphisa umonakalo esiwudalayo emhlabeni kuba kuhle ngoba ekugcineni sonke sizothinteka.’
Isivande futhi esifundisa ngamasiko nefaka imidwebo namasondo nayo ibiyingxenye ye-Phone Call to the World kwakhiwe e-Bechet kanti imifino izonikelwa emindenini ehlwempu.
‘Sihlobise amasondo amadala asesebenzile. Siwenze amasondo axoxa udaba oluthile ngemvelo. Amanye akhuluma ngokushintsha kwezikhathi noma amasizini. Njengoba sazi imvelo iyashintsha njengoba nathi singabantu sishintsha. Ushintsho lusilungiselela izinselelo zempilo namathuba angcono,’ kusho uMnu Chulumanco Lwana naye obeyingxenye ye-ARROWSA Bechet.
Amavidiyo aqoshwe futhi ahlelwa ngobhekelele umsebenzi we-visual arts kwi-ARROWSA, uMnu Vincent Salanji noNksz Shanette Martin we-South Roots International. Lamavidiyo abeyingxenye yombukiso we-Phone Call to the World COP26. Angabukwa lamavidiyo ku-YouTube ngokuciphiza lapha: https://www.youtube.com/channel/UC4YbvfHL-MPMDVGMvQDP_5A.
U-Salanji uthe: ‘Ngichazekile ngendlela abebebambe iqhaza abasebenzise ubuciko ngayo ngezindlela ezihlukene ukuchaza izinkinga zomphakathi. Ubuciko ngulimi olumnandi lomhlaba wonke, busenza sonke sixoxe ngezinto esibhekene nazo sikhululekile emiphakathini ehlanganisa abantu bamasiko ahlukene ikakhulukazi ngalesi sikhathi lapho sibhekene khona nanobhubhane. Kimina ubuciko bokusebenzisa amavidiyo buthinta inhliziyo yawo wonke umuntu ngendlela engachazeki.”
Lomsebenzi usube wusizo olukhulu kangangokuthi uDlamini nabafundi banentshisekelo manje yokuthi ezemvelo ezifana nokuguquguquka kwesimo sezulu kumele zifakwe zibe yingxenye yokufundisa izingane ezikoleni. Unethemba lokuthi uzofaka nezinkampani kusetshenziswa ubuchwepheshe ukufundisa intsha ngezemvelo.
Ubuciko obunhlobonhlobo bungatholakala noma ngabe ukuphi emhlabeni ngokulandela lapha: Phone Call to the World Interactive Media Map